अवैध मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिए सत्याग्रह गर्ने डा.केसीको चेतावनी
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार आकस्मिक रुपमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक डाकेका छन् । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि नै ओलीले आकस्मिक रुपमा आयोगको बैठक बोलाएको बताइएको छ ।
चिकित्सा क्षेत्रका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले भने ओलीले बोलाएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले आयोगको बैठकले अवैध सम्बन्धन दिए सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र यमनमा रहेका उनले बिहीबार विज्ञप्ति नै जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई समेत ओलीको अवैध निर्णय विरुद्ध लाग्न आग्रह गरेका हुन् ।
उनले ओलीलाई गैरकानूनी रुपमा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएमा त्यस विरुद्ध सत्याग्रह शुरू गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
उनले नेपाल आएर सत्याग्रह गर्ने बताएका हुन् । ञयो अवस्थामा चिकित्सा शिक्षाको मर्यादा र संवेदनशीलता बुझेर त्यस खाले अवैध निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नहुन तथा त्यसलाई रोक्न म चिकित्सा शिक्षा आयोगका सम्पूर्ण मर्यादित सदस्यहरुलाई अपिल गर्दछुञ, डा. केसीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगका सदस्यले निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णयमा साथ दिए उनीहरुलाई समेत आफूले नछाड्ने केसीले चेतावनी दिए ।